Soosaarayaasha & Alaab-qeybiyeyaasha Qalabka TV-ga Dijital | Shiinaha Warshadaha Qalabka Digital TV
Dulmarka Wax soo saarka ZJ3308AT 8 ee 1 ATSC modulator waa badeecad cusub oo loogu talagalay taageerida gelinta IP. Waxay leedahay 8 kanaal isku dhufasho badan iyo 8 ATSC Kanaal wax ka beddela, waxayna taageertaa ugu badnaan 256 IP gelinta dekedda GE. ZJ3308AT waxay leedahay awood wax soo saar awood leh oo leh 8 sideyaal aan u dhaweyn (50MHz ~ 960MHz) soo saar iyada oo loo marayo sheyga wax soo saarka RF. Nidaamka qalabkani wuxuu noqon karaa khad la kontoroolo isla markaana lagu casriyeeyo shabakad, taas oo si weyn loogu isticmaali karo ATSC shabakada baahinta dhijitaalka iyo ...
ZJ3542D Qalabaynta Qalabaynta Badan (DVB-T Out)
Shaxanka ZJ3542D qaabeeyaha badan ee wax-ku-oolka ah waa qalab dhan-ka-mid ah kaas oo isku daraya demodulation, trans-mux iyo qaabeynta hal kiis si loogu beddelo calaamadaha RF wax soo saar. Waa kiis 1-U ah oo taageera 4 gashiga tuner-ka si ay uga hesho calaamadda dayax-gacmeedka, fiilada ama berriga. Si loo daboolo shuruudaha kala duwan ee macaamiisha, ZJ3542D sidoo kale waxaa lagu qalabeeyaa 2 ASI talooyin, iyo wax soo saar leh 2 koox oo gooni ah dekadaha ASI iyo 2 MPTS UDP IP port. Calaamadaha wax lagu beddelay ee wax soo saarka ah waa in ay helaan TV-yada, STB iyo iwm.
Tusmada ZJ3402E waa qaab-hawleed heer sare ah oo loo soo saaray iyadoo loo eegayo heerka DVB-S2 (EN302307) oo ah heerka jiilka labaad ee isgaarsiinta satellite-ka ballaadhiyaha Yurub. Waa in loo beddelo soo gelinta ASI iyo calaamadaha IP-da beddel ahaan wax soo saarka DVB-S / S2 RF. Habka iskudhafka BISS waxaa lagu dhejiyay modulator-ka DVB-S2, kaas oo ka caawiya inuu si ammaan ah ugu qaybiyo barnaamijyadaada. Way fududahay in lagu gaadho kontoroolka maxalliga ah iyo kan fog iyadoo la adeegsanayo barnaamijka Web-server-ka ee NMS iyo LCD qaybta hore ....
8 ee 1 Qalabka DVB-T
Tusmada 8-da 1 modulator DVB-T waa qalab dhan-in-mid ah oo aan soo saarnay. Waxay leedahay 8 kanaal isku dhufasho badan iyo 8 dariiqyo wax ka beddelaya DVB-T, waxayna taageertaa ugu badnaan 256 IP wax-soo-saar iyada oo loo sii marinayo dekedda GE iyo 8 sidayaal aan u dhowayn (50MHz ~ 960MHz) oo wax soo saar ah iyada oo loo marayo interface-ka wax soo saarka ee RF. Qalabka sidoo kale waxaa lagu gartaa heer sare oo isku dhafan, waxqabad sare iyo qiimo jaban. Tani waa mid aad ula jaan qaadi karta nidaamka warfaafinta ee jiilka cusub ee DTV. Astaamaha Muhiimka ah ports 3 GE port (max 256 IP gudaha): Data1 & Dat ...
ZJ3306I 6 gudaha 1 ISDB-T Modulator
Dulmarka Wax soo saarka ZJ3306I 6 ee 1 ISDB-T modulator waa aaladdii ugu dambeysay jiilka Mux-modulating. Waxay leedahay 6 kanaal isku dhufasho badan leh iyo 6 (ISDB-Tb) kanaallo wax ka beddelaya, waxayna taageertaa ugu badnaan 192 IP wax-soo-saar iyada oo loo marayo 3 dekeddaha GE iyo 6 xambaarayaal aan ku dhegganeyn (50MHz ~ 960MHz) oo loo soo saaro iyada oo loo marayo soo-saarka wax soo saarka RF. Qalabka sidoo kale waxaa lagu gartaa heer sare oo isku dhafan, waxqabad sare iyo qiimo jaban. Tani waa mid aad ula jaan qaadi karta nidaamka warfaafinta ee jiilka cusub ee DTV. Astaamaha Muhiimka ah ports 3 GE ports (ma ...
Tusmada ZJ2406B DVB- (T) modulator waa aaladdeenna oo dhan oo hal-hal ah oo isku dhafanaysa demodulation, trans-mux iyo wax ka beddelka hal kiis si loogu beddelo calaamadaha DVB- (T) RF wax soo saarka iyo wax soo saarka IP-ga ee ka sarreeya UDP. Qalabkan oo ku qalabaysan 2 DVB-S / S2 gashiga tuner, hal GPS 10MHz dekedda galinta iyo hal dekedda gelinta 1PPS. Calaamadaha qaabeynta wax soo saarka waa in ay helaan TV-yada, STB iyo wixii la mid ah. Qalabkan DVB- (T) wuxuu kaloo isla mar ahaantaa taageeraa la-qabsiga toosan ee tooska ah iyo kuwa aan tooska ahayn. Shaqada BISS sidoo kale waa lagu dhejiyay ...
ZJ2406 DVB-T2 Modulator Hordhaca iyo Sawirka Gudiga Dhabarka
Tusmada ZJ2406 DVB-T / T2 modulator waa badeecadeena cusub ee la soo saaray iyada oo la waafajinayo heerka DVB-T / T2. Iyada oo tiknoolajiyaddeeda casriga ah ee casriyeynta ah, qaab-dhismeedkani wuxuu si wax ku ool ah u isticmaali karaa khayraadka dhulka oo wuxuu suurtogal ka dhigayaa in la bixiyo calaamado lagu kalsoonaan karo oo loogu talagalay qalabka taagan, kuwa guurguura iyo kuwa la qaadi karo. Marka loo barbardhigo DVB-T, awoodda kanaalka waxaa lagu kordhiyay 30% iyada oo loo marayo side-side isku mid ah heerka sawaxanka (CNR). Intaa waxaa sii dheer, qalabkan waa la casriyeyn karaa lana xakameyn karaa iyada oo loo marayo shabakadda syst ...
Tusmada ZJ2406 DVB- (T) modulator waa badeecadeena cusub ee la soo saaray iyadoo la waafajinayo heerka DVB- (T). Iyada oo tiknoolajiyaddeeda casriga ah ee casriyeynta ah, qaab-dhismeedkani wuxuu si wax ku ool ah u isticmaali karaa khayraadka dhulka oo wuxuu suurtogal ka dhigayaa in la bixiyo calaamado lagu kalsoonaan karo oo loogu talagalay qalabka taagan, kuwa guurguura iyo kuwa la qaadi karo. Marka loo barbardhigo DVB-T, awoodda kanaalka waxaa lagu kordhiyay 30% iyada oo loo marayo side-side isku mid ah heerka sawaxanka (CNR). Intaa waxaa sii dheer, qalabkan waa la casriyeyn karaa laguna xakameyn karaa nidaamka shabakadda ...
ZJ3348D 48 gudaha 1 IP QAM Modulator
ZJ3348D 48 ee 1 IP QAM modulator waa Mux-scrambling-modulating qalab dhan-in-mid ah oo ay soo saartay DEXIN. Waxay leedahay 48 wadiiqooyin isku dhafan, 12 kanaal isdaba-marin ah iyo 48 QAM (DVB-C) kanaallo wax ka beddelaya, waxayna taageertaa ugu badnaan 1536 IP iyada oo loo marayo 3 dekedda GE iyo 48 sidayaal aan u dhoweyd (50MHz ~ 960MHz) wax soo saar iyada oo loo marayo interface-ka wax soo saarka ee RF. Aaladda waxaa lagu gartaa laba dekedood oo wax soo saar ah oo RF ah oo ballaarinaya xaddiga ballaadhinta ee qaadayaasha QAM Astaamaha Muhiimka ah ● Max 1536 IP gelinta illaa 3 dekedda GE (SFP interface ...
32 gudaha 1 IP QAM Modulator
32-kan 1 modulator IP QAM waa qalab Mux-scrambling-ka beddelaya dhammaan-hal-qalab. Waxay taageertaa ugu badnaan 1024 IP-ka iyada oo loo marayo 3 dekeddaha GE iyo 32 isku dhufashada isku dhafan ee QAM (DVB-C) oo lagu beddelayo kanaallo wax ku ool ah oo aan la socon (50MHz ~ 960MHz) wax soo saar iyada oo loo marayo sheyga wax soo saarka RF. Qaab-dhismeedka qaab-bixinta-qaab-bixineed ee qaab-dhismeedkaaga mushahar-bixinta ah iyo qaabeyn dabacsan ayaa ka dhigaya mid si aad ah loo qiyaasi karo, laguna kalsoonaan karo oo leh waxqabad sare, dhammaantoodna la jaan qaadi kara nidaamka warfaafinta ee jiilka cusub ee CATV. Furaha Muhiimka ah ...
16 gudaha 1 IP QAM Modulator
Tani 16 ee 1 IP QAM modulator waa jiilkii ugu dambeeyay ee Mux-scrambling-modulating qalab dhan-in-hal ah oo aan soo saarnay. Waxay leedahay 16 kanaal isku dhufasho badan, 16 isdabamarin iyo 16 QAM (DVB-C) kanaallo wax ka beddelaya, waxayna taageertaa ugu badnaan 512 IP wax-soo-saar iyada oo loo marayo 3 dekedda GE iyo 16 sidayaal aan u dhawayn (50MHz ~ 960MHz) wax soo saar iyada oo loo marayo sheyga wax soo saarka RF. Qalabka sidoo kale waxaa lagu gartaa heer sare oo isku dhafan, waxqabad sare iyo qiimo jaban. Tani waa mid aad ula jaan qaadi karta jiilka cusub ee CATV br ...